Biden oo laalay sharci uu hore u ansixiyay Trump | Waxsansheeg News
You are here : Waxsansheeg News » War » Biden oo laalay sharci uu hore u ansixiyay Trump
Posted by Nuux Abdi on June 10th, 2021 05:56 AM | War
Amarkan ayaa laga keenay dacwado dhowr ah weligiisna lama dhaqan gelin.
Hase yeeshee, Waaxda Dhaqaalaha Mareykanka ayaa haatan qiimeyn ku sameyn doonta barahan laga leeyahay Shiinahay.
TikTok kama uusan hadlin arrintan.
Trump ayaa sanadkii hore amray inaan lala soo degin app-ka TikTok, oo ay leedahay shirkadda Shiinaha ee Bytedance.
Wuxuu markaas ku sheegay inay khatar ku tahay ammaanka Maryekanka.
Waxaa la soo jeediyay in shirkadaha Oracle iyo Walmart ay qaadaan mas’uuliyadda maamulka xogta TikTok ee gudaha Mareykanka.
Balse dacwado badan oo lagu furay iyo Mr Trump oo xilka ka sii degayay awgood, in la mamnuuco bartaas iyo in shirkadaha Maryekanka ay ku lug yeeshaan midkoodna ma miro dhalin.
Wuxuu garwaaqsadan in barahan ay “dadka isticmaala ka heli karaan xog badan”.
“Xog ururintan waxay sababi kartaa halis ah in ajaanibtu ay helaan xogtaas,” ayuu yiri.
TikTok waxaa bil walba adeegsada ilaa 80 milyan oo Ameerikaan ah.
Ashley Gorski, oo ah qareen sare ayaa soo dhoweysay go’aanka lagu laalayo mamnuuciddaas.
“Madaxweyne Biden wuu ku saxan yahay inuu laalo amarrada sare ee maamulkii Trump, kuwaas oo carqaladeynata xuquuqda ay Mareykanka ku leeyihiin dadka isticmaala TikTok iyo WeChat,” ayay tiri.
« Laba siyaabood ayaa maayerka Hargeysa loogu doorankaro”faadumo sicid
Raysal wasaare Rooble oo magacaabay Guddi sare oo qaabilsan arrimaha Doorashooyinka dalka »